Dadweynaha Bosaaso oo Diyaar-garow ugu jira Munaasbadda Ciidul-Fidriga – Radio Daljir
Dadweynaha Bosaaso oo Diyaar-garow ugu jira Munaasbadda Ciidul-Fidriga
Luulyo 15, 2015 7:44 b 0
Arbaco, Luuliyo 15, 2015 (Daljir) — Dadweynaha magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa diyaar-garow aad u balaaran ugu jira munaasbadda Ciidul-Fidriga oo ay maalmo qudha inaga xigaan, waxaana sidan si la mid ah looga dareemayaa guud ahaan Puntland.
“Waxaan saaka u soo baxay inaan dharka Ciidda u gado ilmahayga oo ka kooban seddex caruur ah ,runtii Ciidda waa maalin umadda oo dhan ay wada farxaan “ ayey tiri Hooyo Aniso Jaamac oo maanta aan kula kulmay suuqa Bosaaso.
“Labo kamid ah caruurtayda xaafadda ayaan uga soo tagay ,waayo waan garanaya cabirka ay ka qaataan dharka ,si aan halkan ugu ciidno waxaan ka nimid Qardho “ ayey mar kale tiri Aniso oo ku faraxsanayd u adeeggidda ilmaheeda.
Suuqa weyn ee Bosaaso ayaa la keenay dhamaan agabyadii Ciidda ,waxaana indhahaaga ay qabanayaan dukaamo lagu soo camiray agabyo ay kamid ah yihin dharka ,kabaha oo isugu jira rag iyo dumar iyo walibaha alaabaha ay cururutu ku ciidaan.
“Walaal waxaa magaalada la keenay wax kasta oo ay dadweynuhu u baahanaayeen munaasabaddan awgeed ,inta badan waxaa nalooga keenay wadamada Khaliijka “ ayuu isna yiri Daahir Cismaan oo kamid ah dukaanlayda Bosaaso.
Ugu dambeyn, diyaar-garowgan ayaan ka socda dhamaan deegaanada Puntland, waxaana Ciidul-fidriga ay imaanaysaa ,iyadoo gobolka uu ku jiro sicir barar aad balaaran oo saameeyay dhamaan maciishadahii daruuriga ah.